မြန်အောင်သား: January 2013
PDF file တွေကို Edit လုပ်လို့ရမယ့် F Advanced PDF Editor 3.00 With Crack
ဒီ Software လေးကတော့ဗျာ...PDF File တွေကို Edit လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်တဲ့ ရှာရဖွေရခက်မှာစိုးလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ crack file လေးပါတော့ licence အတွက်မပူရတော့ဘူးနော်။
F Advanced PDF Editor with Paragraph Editing provides high end features to generate professional looking PDF documents quickly and easily. Many times document authors need to do extensive editing directly toaPDF file. Whether you’re editing paragraphs, font sizes, or more, the F Advanced PDF Editor providesaword processor environment to editing PDF documents. When you need to changeasingle word,aparagraph, or the entire page, Advanced PDF Editor will reflow and reformat your text enabling you to create professional looking PDF documents. F Advanced PDF Editor enables users to find information fast with intelligent, automatic bookmark creation. Also it can insert page numbers or dates as Headers and Footers directly without requiring other applications; helping you to add more information into the PDF files and navigating them with ease. Watermark can indicate the status of created PDF files, such as Draft or Confidential. This is the ideal solution for PDF documents where you do not have the original source file.
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Wednesday, January 30, 2013 No comments:
ကျွန်တော်အရင်ဆုံး ThuDaNu All In One ကို Credit ပေးပါတယ်။ ဒီ root file က ThaDaNu က ယူလာတာပါ။လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြီး screenshot လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Wednesday, January 30, 2013 8 comments:
Windows Software တော်တော်များများအတွက် Universal Keygen 2013
Windows Software တော်တော်များများအတွက် လိုအပ်မယ့် keygen,serial number ကို အဆင်ပြေပြေရနိုင်မယ့် universal keygen 2013 ပါ။ ကျွန်တော့်ညီအစ်ကို သူငယ်ချင်းတွေ လိုရမယ်ရ ဆောင်ထားလို့ရအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။လိုသလို သုံးပေါ့ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Tuesday, January 29, 2013 No comments:
ကဲဗျာ...ဒါကတော့အားလုံးလည်းသိကြတဲ့ android တွေကို root လုပ်တဲ့ tool လေးပါ။ ကျွန်တော့်ညီအစ်ကို သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် မျှဝေတဲ့အနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ version 1.3 ပါခင်ဗျာ။
Download Kingroot PC V1.3
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Monday, January 28, 20133comments:
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Thursday, January 24, 20133comments:
sony xperia neo l ကို root လုပ်တာလေးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ တင်သမျှ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သေချာစမ်း သပ်ထားပြီးသားတွေချည်းပါ။ အဆင်ပြေနိုင်တာတွေပဲတင်ပေးပါတယ်။
ဟောဒီ sony xperia neo l ကို root လုပ်တာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်၅လုံးလောက်ကို
sony xperia neo l ကို root လုပ်မယ်ဆိုရင် အပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲပြီး ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ သူက kernel version ကိုပြောင်းပြီး root လုပ်တဲ့နည်းလေးမို့လို့ပါ။ ဒီအတိုင်းစာဖတ်သူတွေ ဖတ်ရင် စာတွေအရမ်းများတယ်ထင်ရတော့ ရှုပ်တယ်ထင်မှာစိုးလို့ပါ။တကယ်တော့ လုပ်ပုံကိုသေချာသိသွားရင် လွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အပိုင်း သုံးပိုင်း ကျွန်တော်ခွဲလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Tuesday, January 22, 2013 1 comment:
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, January 20, 20132comments:
android phone တွေအတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ GOthere-Myanmar-Beta5.apk
Android Phone တွေထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ software လေးပါ။ အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ beta5 လေးမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သဘောကျတာလေးက phone finder လေးပါတယ်နော်။ မိမိဖုန်းတကယ်လို့ပျောက်သွားခဲ့ရင် location ရှာနိုင်တယ်ဗျ။ တခြား features အားသာချက်တွေကတော့ အထွေအထူးမပြောတော့ဘူးဗျာ။ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, January 20, 2013 No comments:
Unlockroot 3.1 လေးပါခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးထွက်မို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Unlockroot 3.1 Download Here
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, January 18, 2013 No comments:
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Wednesday, January 16, 2013 No comments:
Jelly Bean အတွက် root tool-Root with Restore v18(latest version)
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ...Root with Restore v18 နောက်ဆုံးထွက် version ပါ။ ဒီ tool လေးနဲ့ root လုပ်ပုံက အရင်က ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ Huawei U9508 ကို root လုပ်ပုံနဲ့ အတူတူပါပဲ။
root file လေးကိုတော့ ဒီမှာဒေါင်းပါခင်ဗျာ။
root လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ ဒီမှာ ကြည့်ကြပါ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းပဲနော် ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Monday, January 14, 2013 No comments:
Huawei U9508,Andriod 4.0,V100R001CHNC00B024 Firmware လေးပါ။
ကဲ Huawei U9508 V100R001CHNC00B024 ရဲ့ firmware link လေးပါ။ 631MB တော့ရှိပါတယ်။ ဒီလင့်က အချိန်ကြာကြာမမြဲတတ်လို့ လင့်မသေခင် မြန်မြန်လေးတော့ ဒေါင်းထားကြပါခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Wednesday, January 09, 2013 1 comment:
ဓါတ်ပုံကို movie လုပ်ချင်သူများအတွက် DVD PixPlay v7.05.330 Full Version Patch Crack Serial Key
ကျွန်တော့်အသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ photo designer တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ အခု ဒီပို့စ်ကိုတင်ရတာလည်း ဓါတ်ပုံကို movie လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီ software လေးက professional မဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်လေးတော့ အဆင်ပြေအသုံးဝင်တယ်ဗျ။အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အဆင်ပြေအောင် serial လေးရှာပေးထားတယ်နော်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Wednesday, January 09, 2013 No comments:
Computer မှာ Android application တွေရဲ့ icon တွေကို မြင်ရအောင်လုပ်ပေးတဲဆော့ဝဲ
ဒီပို့စ်လေးကတော့ ရွှေနဒီနည်းပညာဘလော့ကနေတစ်ဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
ရွှေနဒီနည်းပညာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ software လေးက ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ရတာပါ။ရလာတဲ့ exe file လေးကို ကွန်ပျူတာမှာတင်လိုက်ရုံပါပဲ။ပြီးရင်တော့ ကွန်ပျူတာမှာ android application တွေဖြစ်တဲ့ apk နဲ့ gpk file တွေရဲ့ icon ကိုမြင်ရပြီပေါ့ဗျာ။ android အသုံးပြုသူ သူငယ်ချင်းတွေ လိုချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Monday, January 07, 20132comments:
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကို ပို့စ်အသစ်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Microsoft Windows user တွေတော်တော်များများ အသုံးပြုလာကြတဲ့ Windows 8 မှာ ဖြစ်တဲ့ .NET Framework 3.5 ဖြေရှင်းနည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Windows 8 မှာ အချို့အချို့သော software တွေတင်ရာမှာ .NET Framework 3.5 လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအောက်ကပုံလေးအတိုင်း ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Monday, January 07, 2013 No comments:
ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ကျွန်တော်ပို့စ်အသစ်များမတင်ဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ္စ`အ၀၀ကြောင့် ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကို ဂရုစိုက်ချိန်နည်းခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကျွန်တော့် ဘလော့လေးကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တင်ပေးတဲ့ ပို့စ်နဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီသွားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ၀မ်းသာကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အချိန်တချို့ကို ပေးပြီး လုပ်ရထားရတဲ့ ပို့စ်လေးတွေမှာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ပီတိတွေပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စိတ်ချမ်းသာသလို အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ချမ်းသာသွားတာကိုကျေနပ်ပါတယ်။နောက်လည်း ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပါဦးမယ်။